Ngokuhamba kwesikhathi, yiluphi uhlobo uju yemvelo uqala crystallize, ngaphandle ezimweni ezingajwayelekile. Ekilasini ngalinye, le nqubo ithatha indawo ngendlela yalo. Ngokwesibonelo, crystallization uju dandelion yakha indawo, mass okuqinile ine isilinganiso rapeseed sesitshalo noma isakhiwo esiqinile, zinhlayiya ezincane. Le nqubo engokwemvelo, akashintshi Ukuthanda ukudla, begazi futhi ukudla.
Kusukela lokho kuncike crystallization
Uju crystallizes ngezindlela ezahlukene, futhi kuncike ezintweni eziningana: simila, kusukela esithathelwe umpe kusuka okuqukethwe uju amanzi, Ukwakheka carbohydrate, izinga lokushisa kwesikhathi isitoreji, kusukela crystallization izikhungo ngisho izenzo Kwakuseshwa ngesikhathi uju ukucutshungulwa .
uju avuthwa has laqanjwa izingxenye eziyinhloko - glucose ne fructose, bakha 95% isisindo ingqikithi. Crystallization incike isilinganiso carbohydrate. Uma okusezingeni eliphezulu fructose uju, inqubo kuhamba kancane. Okunjalo uju acacisa othambekele delamination futhi akuthanjiswanga. Okunamandla glucose sizakhele kwakhiwa phezulu emnyama, ocebile fructose uketshezi. uju onjalo uvamile kakhulu eSiberia.
Izinhlobo crystallization zincike ukuvumelana uju, okuyinto ozuza umkhiqizo ngesikhathi crystallization:
Saloobraznaya ukungaguquguquki. Uju inobungako iyunifomu obukhulu ngaphandle zinhlayiya ebonakalayo.
Okuncane ukuthungwa. Ngemva uju zakristallizuetsya e isisindo salo waphawula zinhlayiya esihle usayizi kuze kufinyelele 0.5 mm.
ukuthungwa Maholoholo. Med at zasaharivaniya yakha zinhlayiya ezinkulu kabani usayizi ifinyelela ezingaphezu kuka 0.5 mm.
Isilinganiso amanzi ne-glucose
Ukuhlola crystallization izizathu uju, kufanele kuphawulwe ukuthi ukubaluleka okukhulu kule nqubo has a isilinganiso yamanzi kanye nenani glucose. Uma Inkomba mkhulu kunezinhliziyo 2: 1, uju ngeke crystallize. Uma isilinganiso lingaphansi kuka 1.7, kukhona ingxenye enkulu ematfuba ukuthi umkhiqizo zizoqhubeka eside ewuketshezi. Lapho okuqukethwe amanzi in uju kusuka 15 kuya 18% womkhiqizo, crystallization ishesha. Ephambi kwezinduna amanzi engaphezu kuka-18% ngaphansi inqubo olunzulu iqhubeka, ngoba lokuhlushwa carbohydrate isisindo incipha. Ukuvumelana viscous uju at amanzi ongaphakeme eside azigcina eziningi eziwuketshezi.
Ukuba khona kwamanye ushukela
Ngaphezu fructose kanye glucose in yayo Ukwakheka uju iqukethe okunye ushukela: melezitose, sucrose, trehalose, raffinose, nabanye. Ngakho beloakatsievom futhi Linden uju, lapho okuqukethwe maltose kuyinto 6 kuya ku-9%, uju, crystallization kwenzeka kancane. Umkhiqizo kusuka sunflower, sainfoin, ukudlwengula maltose 2-3% sugarcraft uya ngokushesha.
Ngo ezifana zinhlobo uluju onsundu, uju wokuqukethwe lelisetulu kakhulu melezitose. Yini eyenza? I kwenze ngesikhathi crystallization uwela njengoba flocculating zinhlayiya. Ezinye izindaba zika-ushukela ekhona uju, musa ibe nethonya enkulu inqubo gelling.
Umthelela on the lokushisa crystallization
uju crystallization lokushisa linendima ebalulekile enqubeni. Ngezinye lokushisa sesitoreji sugarcraft siyehla. Ngezinye aphakeme - zinhlayiya ezinkulu akhiwa ngesikhathi saccharification. Amazinga elikhulu for isitoreji uju kumele kube kusuka 10 kuya 18 degrees. Ukuze umkhiqizo izinga wahlala kangcono wehlele umkhawulo ephansi. Uma afanayo isitoreji uyohlale kwenzeke degrees 14, crystallization kungenziwa ngesivinini esikhulu. Uma izinga lokushisa komzimba degrees abangaphezu kuka-25, izinqubo ukuqina kuthiwa kancane.
Kufanele uju yemvelo crystallize?
Crystallization uju - inqubo yemvelo. osolisayo Okuningi Kuyaphawuleka, uma uju ngesikhatsi isitoreji isikhathi eside akusho crystallize, futhi kwathiwa njengendlela yemvelo. Lokhu kufakazela kuphela ukuthi inhlama buhlanjululwe, futhi cishe kakhulu. Ukungabikho crystallization Futhi ungathi ukuthi uju eqoqwe abonisa ukungavuthwa. Nokho, uma izimo isitoreji zifeziwe iziqukathi kahle evaliwe, ngisho lokushisa, mass ayikwazi ukushwaqa eminyakeni. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani crystallization uju, kungakhathaliseki kukhona iqhinga. Kulula - uma kukhona fructose, umkhiqizo likashukela nakanjani. Kanjani ngokushesha kwenza le nqubo kuxhomeke ezicini eziningi: lokushisa isitoreji, ikhwalithi nezinhlobonhlobo uju. Futhi, uma ushintsha izinga lokushisa - Honey bathutha cool endaweni efudumele - maduzane uzoqala crystallize.
crystallization isikhathi uju. izinhlobo
Kuye grade uju crystallization inqubo kungaba msinyana nofana buthaka. Isikhathi imisiwe isikhathi esingangonyaka noma ngaphezulu. Crystallization nokunye okufana nokolweni uju cishe inyanga noma ezimbili ngemva kokuvuna. zasaharivaniya isikhathi kungenziwa enwetshiwe uma uju esitolo endaweni epholile. izinhlobonhlobo Buckwheat basonta isigaba ewusizo kakhulu. Isici esiphawulekayo uju - brown umbala omnyama futhi ukunambitheka kancane Ukuthoma. Inani nokunye okufana nokolweni uju - wokuqukethwe lelisetulu yensimbi, ngakho-ke lokhu ezihlukahlukene Kunconywa ukusetshenziswa labo elithwala umoya-mpilo ephansi. Nokunye okufana nokolweni uju inani elikhulu enzyme ezahlukene. Lokhu kuwusizo ngakolunye uhlangothi, kodwa ngakolunye ngokuvamile baxabane ahlukahlukene nomzimba. Futhi uzinake ukuthi uju nokunye okufana nokolweni - omunye kakhulu izinhlobo okunama-kilojoule amaningi.
Olunye uhlobo izinhlobo amnyama - usika izingcezu azidingayo ngokucophelela uju. Libhekene ukunambitheka elihlale inkulumo. Umkhiqizo ukunambitheka - Ukuthoma, kancane ezibabayo. Iqukethe amavithamini amaningi kanye nezakhi ezuzisayo. Kanye nokunye okufana nokolweni, nezinye izinhlobo eziningi kubangela komzimba. Chestnut uju iyasiza kulabo izinso izinkinga, kwegazi, pheshana emathunjini. Uma uju lilondolozwe kahle (kumayelana zonke izinhlobo), ngeke eside aqhubeke ewuketshezi.
Njengoba sithole, uju crystallization nezikhathi kuwo onkhe emabanga lihlukile. Linden uju sikhula masinyane, ekamelweni lokushisa - in a izinyanga ezimbalwa kuphela. Amagama okufanayo zonke izinhlobonhlobo imbali, ababiziweyo utshani okuxubile. Linden uju - ethandwa kakhulu futhi ewusizo. Hlanza, umkhiqizo fresh has a shades ukukhanya, iphunga elimnandi. Ngokuvamile, uju white amakhambi ongahlanzekile. It has ayelapha ezifana antipyretic, eqeda ukuvuvukala, diaphoretic. Lapho kubanda umsebenzi ungcono ezinye izinhlobo.
nezinyosi zasendle eqoqwa abahlala phakathi emahlathini, entabeni emifantwini, iyafika elicinene kakhulu futhi acacisa cishe ngokushesha.
Hlobo luni uju akusho crystallize?
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi zonke uju yemvelo crystallizes. Kukhona okuhlukile ezingavamile. Umkhiqizo esenziwe izinyosi kusukela umpe, elalihlanganyela eKhupro, itiye willow ingagcinwa iminyaka futhi akusho crystallize. Ungakhathazeki uma lokhu kwenzeka. Uma umdayisi uju, kubalulekile ukunikeza ulwazi olufana kumakhasimende, ukuze akakungabazanga ubuqiniso umkhiqizo. Thuthukisa inganekwane ukuthi zonke uju yemvelo crystallizes ngokushesha. Wonke umuntu empilweni zabo, kanye noju kipreyny zingagcinwa ewuketshezi futhi ngemva konyaka noma emibili noma ngaphezulu, uma uqaphele le mibandela USB.
Kungani lukhuni ehlungiwe uju?
Kanjani ukuqala crystallization uju? Umkhiqizo wemvelo impova izinhlamvu samanje, futhi izikhungo lapho crystallization iqala inqubo eqondile. Uma uju sidlulile ngokusebenzisa lemifanekiso ekhethekile ususa yonke impova, amaprotheni izinto, isikhwehlela, kungaba aqhubeke ewuketshezi eside isikhathi esanele. Lokhu kukunika ukubukeka ekhangayo esobala umkhiqizo. Emazweni European supply elikhulu uju okuvela ngaphandle kwelaseNdiya neChina, umenzi kungacacisa kuphela impova. Kwamanye amazwe, umkhiqizo ukuhlanzwa lalibuye sinqatshiwe ukubiza uju. Kukhona nezimfuneko ezithile ukuze uthole ikhwalithi, okuyinto zibhaliswe ikhodi ekhethekile. Baveza ukuthi ayikho yezingxenye ayikwazi ukususwa kule uju, kuhlanganise nempova. Ukuhlunga kuvunyelwe kuphela ukuze akhiphe amanyela organic wezinto ezingaphili.
Kungenzeka yini ukuba Ncibilikisa uju, ngaphandle kokulahlekelwa izakhiwo ezuzisayo?
Uju ukunambitheka ngemva crystallization akuhlukile ketshezi. Nokho, kukhona uketshezi zibelula, nobuhle obukhona kubukeka ebhodweni. I namakhekhe kunezelwa uju elicibilikile kuphela. Ngakho indlela ukuze uthole uju liquid ngu ukuncibilika, kuyilapho nawe ungalushayi ukulahlekelwa izakhamzimba?
Indlela ejwayeleke kakhulu yenqubo ukuguqulela ku ketshezi eqina mass - umkhiqizo Ukushisa indlela. Amazinga elisetshenziswa emaphaketheni yezimboni uju degrees 35 kuya 40. Ngalesi lokushisa, uju Udambisa, akaphelelwa zonke izakhiwo zayo eziwusizo. Ukufuthelana lokushisa eliphezulu noma uju ubiliselwe abalimazayo, hydroxymethylfurfural ekhiqizwa (ushevu ethize).
Ngakho, nazi ezinye imithetho kulabo abaye yanquma Ncibilikisa uju bebodwa:
Uju akufanele ukufuthelana ngenhla 45-50 degrees.
Ungasebenzisi izitsha plastic for peretopki.
Ifanele Ceramic noma ingilazi izinto.
Akubalulekile ukutshala uju ngamanzi, uthola usulubha omnandi wezithelo.
Musa uhlanganise amamaki oluhlukile peretopki.
Indlela ancibilike embizeni ingilazi?
Crystallization uju - inqubo akunakugwenywa, futhi uma udinga yimuphi mass ketshezi, kungenzeka zisebenzisa i elivuthayo ezejwayelekile ingilazi jar. Ncibilikisa uju ngale ndlela ulula. Le ndlela akudingi amalahle noma abilayo ngomlilo, uju bagodla wonke izimfanelo ewusizo. Indlela elula - ukushiya nophiso lwezinyosi uqweqwe kwi kurediyetha ashisayo. Izikhathi eziningana kufanele uvule isitsha. Enye indlela - ukubeka isitsha amanzi kahle evuthayo lonke ebusuku. Amazinga amanzi kumele kube degrees 50.
Indlela zabaseGibithe ziphela amandla a okugeza amanzi?
Uma uju uqweqwe kuyinto embizeni encane, ungakwazi ancibilike kuyo a okugeza amanzi. Ukuze wenze lokhu, thatha epanini ezijulile capacious futhi sigcwale amanzi kuze kube phezulu. Ukuze phansi kahle sekuqala ukufudumala, kungenzeka ukusetha phansi Izinsimbi noma yensimbi ukuma. Bank uju kumele kube cishe ukucwila ngokuphelele emanzini. Ingxube kufanele kube ngokulinganayo efudumele, uju liyancibilika ngalesi okusheshayo. Nale ndlela isisindo ngeke overheat noma thumba. Kungani? Ngoba ijubane uju ukubila sihluke ijubane amanzi abilayo. Uju isisindo nje liyancibilika kancane, abe ethambile, uketshezi, ingeyona iyiphi ezinobuthi. mass Zaphela kungenziwa batheleka yimuphi omunye izitsha.
Umkhuzi squid: izakhiwo ewusizo, zokupheka
Khekhe Puff: ikhalori, inzuzo kanye nokulimala
Iziphi izifundo esingazifunda namuhla angafundani "The Diary Anny Frank"?
Ukuze ufunde indlela ukuthola ulayini enkulisa. Uyini emgqeni electronic?
Hruscheva Nikity unkosikazi: Biography, umlando kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Umkhuleko wocela Health, Bazali, ubuKristu, ubu-Orthodox Nkulunkulu
Kirov Ezempilo & kuyona (sibhedlela Kirov.) Yalta: incazelo, indawo, ukubuyekezwa
"Moskvich-2140". "Moskvich -2140" suite. "Moskvich-2140" - injini